Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka oo la Kulmay Bulshada Magaalada Gaalkacyo • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka oo la Kulmay Bulshada Magaalada Gaalkacyo
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka oo la Kulmay Bulshada Magaalada Gaalkacyo
February 4, 2018 - By: Abdirahman Abdi
Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Cabdweli Jaamac Gorod ayaa kulan la qaatay bulshada qeybaheeda kale duwan ee Magaalada Gaalkacyo. Kulankaasi oo looga hadlay sidii la isaga kaashan lahaa nabad gelyada Magaalada.
Jeneraal Cabdiweli Jaamac Gorod ayaa su’aalo la xiriira amniga Magaalada la weydiiyey, waxa uuna uga warbxiyey bulshadii ka soo qeyb gashay kulanka howsha nabadaynta ah ay wadaan guddiga nabad gelyada isku dhafka ah ee Puintland iyo Galmudug.
Taliyaha ayaa sheegay in meel wanaagsan marayso dadaalada ku aadan nabadeynta Magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaan Gobolka Mudug.
…Ciidamada labada dhinac waxa ay si hufan u wadaan nabad gelyada magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka ayuu yiri Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Cabdweli Jaamac Gorod.
Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Cabdweli Jaamac Gorod ayaa shacabka Magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaan gobolak Mudug ka codsaday in ay al shaqeeyana Ciidanka isku dhafka ah ee loo xil saaray amniga.l
Ugu dambeen Taliyaha ayaa sheegay in Ciidanka howl galaya amniga Magaalada ay isugu jiraan Boolis iyo Milatari kuwaasi buu yiri in la dejiyey goob loogu tala gaay oo ay kala socdaan amniga Magaalada.